iSyncr, dị ka aha ya na-egosi, bụ obere software eji ka mmekọrịta iTunes music, fim, TV na-egosi, pọdkastị na ndị ọzọ si iTunes gị Android ekwentị na mbadamba. Ọ bụ n'ezie mfe iji mgbe ị na-ekpebi okporo mmiri iTunes maka Android. Otú ọ dị, ọ syncs họrọ listi ọkpụkpọ, ma ọ dịghị ka ị na-ahọrọ ka mmekọrịta họrọ songs. Nke ahụ bụ ikwu, oge ọ bụla ị chọrọ ka mmekọrịta iTunes ka Android, ị ga-eme ka n'aka gị Android ngwaọrụ nwere zuru ezu nchekwa. Ma ọ bụ na ị gaghị eme na mmekọrịta ọma. Ka njọ, ọ na-apụghị eji mgbe Samsung Kies arụnyere. Ọ bụrụ na ị a Samsung onye ọrụ, ị ga-eme ka a nhọrọ: iSyncr ma ọ bụ Kies? Na-eche annoyed banyere ya? Ị nwere ike lee ụfọdụ ndị ọzọ a pụrụ iji dochie iSyncr. Eleghị anya, ọ na-arụ ọrụ mma karịa ya.
Samsung Kies na-tumadi ji jikwaa ọdịnaya na Samsung ngwaọrụ site Mac ma ọ bụ PC. Ọ na-enyere gị aka ndabere kọntaktị, ozi, kalenda, foto na ihe ndị ọzọ na kọmputa na-eweghachi a ọdịnaya mfe. Ọ na-ahapụ ị nyefee music, video na foto na site na gị Samsung ngwaọrụ. Ọ bụrụ na e software update maka gị Samsung ngwaọrụ, i nwere ike iji Kies imelite mfe.
Otú ọ dị, njikọ odida nke Samsung Kies-apụghị ileghara anya. Ebe ọ bụ na ọ bụ nanị maka Samsung ngwaọrụ, ị ga-ahụ ndị ọzọ na mgbe i nwere ngwaọrụ ndị ọzọ, dị ka Google Nexus 5.
N'adịghị ka Samsung Kies, Wondershare TunesGo (Mac) ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Win) e mere maka multiple Android ntị na mbadamba, gụnyere Samsung, HTC, Sony, Google, LG, Motorola, Huawei, na ndị ọzọ. Na ya aka, ị nwere ike mfe mmekọrịta iTunes na Android on Mac na PC.
Mmekọrịta iTunes ka Android - nnọọ 1 Pịa.
Mmekọrịta niile ma ọ bụ họrọ iTunes music, listi ọkpụkpọ, fim, TV na-egosi, pọdkastị, iTunes US Geological
Nyefee Mac na PC na-Androd maka music, fim, listi ọkpụkpọ na ndị ọzọ.
Hichaa iTunes n'ọbá akwụkwọ site ihichapụ oyiri songs, gwara music mkpado, na-agbazi ọgụ egwu na songs'names.
Arụ ọrụ nke ọma na Android 2.1 na elu.
Dị ka iSyncr, doubleTwist nwere 3 nsụgharị (n'ihi na PC, Mac na Android) dị. Ọ bụ a fechaa ngwá ọrụ, na nke ị nwere ike mmekọrịta iTunes music, videos na foto gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba na eriri USB. Ya Android version doubleTwist AirSync bụ ihe dị mfe na-eji music ọkpụkpọ. Ị nwere ike iji ya ka mmekọrịta iTunes music, ịkpọọ egwu ma jikwaa pọdkastị-ejighi eriri. Otú ọ dị, Ọ na-adịghị akwado ngwaọrụ na Android 4.3 na mgbe e mesịrị mgbe ejikọta site na eriri USB. N'ezie, i nwere ike iji WiFi, ma i kwesịrị akwụ ụgwọ maka ya.
3 Ụzọ Jikọọ Android na Mac
Top 4 doubleTwist Alternatives maka Ị
Mmekọrịta Ihe niile N'etiti Android na Mac
> Resource> Alternatives> Top 3 Alternatives ka iSyncr maka Mac na PC